Osisi ọgwụ - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Pharmaceutical osisi HVAC Ngwọta
Ndị na-ere ọgwụ na-adabere na arụmọrụ nke ime ụlọ dị ọcha iji hụ na e mezuru ụkpụrụ ngwaahịa dị oke mkpa. HVAC sistemụ n'ichepụta ngalaba nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-elekọta ndị ọrụ gọọmentị na-elekọta nke ọma. Eleghara iwu ọ bụla nke ogo chọrọ nwere ike itinye onye nwe ya na nchịkwa na azụmaahịa ọ bụla. Ya mere, ọ dị mkpa na a na-ewu ụlọ ọrụ ọgwụ n'okpuru sistemụ njikwa njikwa siri ike na nke ọma. Airwoods na-emepụta, na-ewulite ma na-echekwa sistemụ HVAC siri ike na ụlọ mkpocha nke na-ezute mkpa siri ike nke metụtara ọgwụ.
HVAC chọrọ maka ọgwụ
Igwe ikuku dị n'ime ụlọ chọrọ na ọgwụ ọgwụ, gụnyere njikwa iru mmiri na filtration bụ otu n'ime usoro kachasị ngwa ngwa ọ bụla. Otu n'ime usoro kachasị dị egwu bụ ezigbo ikuku. N'ihi na ebumnuche bụ isi na-achịkwa mmetọ na -emepụta ihe n'ichepụta na mpaghara nyocha, ájá na microbe bụ ihe iyi egwu na-adịgide adịgide n'ime ụlọ ọrụ ndị a, na-achọ usoro nhazi nke nyocha na ikuku nke na-agbaso ụkpụrụ ikuku dị n'ime ụlọ (IAQ) ma nyere aka belata ekpughere ọrịa ndị na-efe efe na mmetọ.
Na mgbakwunye, n'ihi na ụlọ ọrụ ọgwụ na-achọ mgbe niile, njikwa njikwa ihu igwe dị mma, ọ dị oke mkpa na usoro HVAC na-adịgide adịgide iji rụọ ọrụ oge niile, mana ọ ga-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka ọnụ ahịa ike dị ala dị ka o kwere mee. N'ikpeazụ, n'ihi na mpaghara dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ventilashị nke onwe ha na mkpa okpomọkụ, a ga-ahazi usoro HVAC ka ọ gbanwee maka usoro nchịkwa ihu igwe dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Siri ike na-emepụta ọgwụ Factory
Quidlọ ọrụ ọgwụ ọgwụ Liquid
Ude Pharmaceutical Factory
Powder ọgwụ Factory
Mgbakwasa Ugboro na Patch Pharmaceutical Factory
Ngwaọrụ Ahụike Medical
Anyị HVAC ngwọta, ike N'uko Systems, na hazie Clean ụlọ aka izute mgbagwoju chọrọ nke na-emepụta ọgwụ n'ichepụta ụlọ ọrụ, nke na-achọ nlezianya particulate na mmetọ akara.
Anyị na-eme nyocha zuru oke maka mkpa ndị ahịa anyị ma nye nkọwa zuru ezu na-echebara usoro mmepụta, akụrụngwa, nhichapụ ikuku oyi, mmiri na drainage, nkọwa gọọmentị na ụkpụrụ.
Maka n'ichepụta ọgwụ, arụpụta ihe na arụmọrụ bụ igodo iji nwee ihe ịga nke ọma. Nhazi nhazi ahụ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya na kọmpat dịka ihe achọrọ maka usoro mmepụta ahụ, nke na-enyere aka na ọrụ mmepụta ma na-eme ka njikwa ọrụ dị irè.
Maka usoro nhicha ikuku, enwere echiche abụọ dị mkpa. Otu bụ njikwa nrụgide dị mma iji gbochie mmetụta nke ikuku mpụga na gburugburu ebe obibi; Na njikwa nrụgide na-adịghị mma iji gbochie mgbasa nke mmetọ ikuku na usoro mmepụta. Ma ị chọrọ nrụgide ikuku dị mma ma ọ bụ nhicha ikuku na-adịghị mma, onye nrụpụta ụlọ ahịa nwere ahụmahụ na onye nkesa, dị ka Airwoods, nwere ike hụ na imepụta, mmepe, na nnyefe nke ihe ngwọta na-egbo mkpa gị. Na Airwoods, ndị ọkachamara anyị nwere ihe ọmụma zuru oke banyere usoro mkpocha ụlọ na usoro ihe owuwu, site na ihe nhicha na omume kacha mma na ngwa HVAC dị mkpa maka ụdị ngwa dị iche iche.
Ebe a na-achịkwa Ọrịa PCR Cleanroom
Disposable nkpuchi Manufacturing Cleanroom
Ivlọ ọrụ ọgwụ na Bolivia
Bolọ Ọrụ Na-ahụ Maka acelọ Ọgwụ Cambodia
Ọrụ Bolroom nke Cleanlọ Ọgwụ na Bolivian